🥇 ▷ Nadiifinta Samsung Galaxy Sport midabbo kala duwan ✅
Nadiifinta Samsung Galaxy Sport midabbo kala duwan
Kaliya maalinta ka dambaysa tusitaanka ugu horreeya siin ee Ciyaaraha Galaxy, Samsung saacada xigta ee smart, hadda Waxaan ka helnaa sawir kale oo la sifeeyay.
Waxaa yaab leh, halkan waxaan ku aragnaa in saddex midab oo kala duwan. Kuwaasoo, marka loo eego, ka duwan yihiin codkii shalay ee cawlan / qalinka.
Waxaan horeyba u filaynay in naqshaddu ay si buuxda ula mid tahay wixii horey loo muujiyey, sidaa darteed dhinacan waxay umuuqataa in xanta ay xukumaan.
Samsung Galaxy Sport (multicolor)
Sawirka kore ee khadadkaani waa midka cusub ee aan ka faalloonaynay. Dhexdeeda waxaan leenahay a urara madow, mid kale oo buluug qoto dheer ah iyo saddexaad oo ah waxa aan tixgelin karno nooc Dahab dahab ah.
Wax uun soo jiidanaya dareenka ayaa ah halkaan Samsung waxay iska fogeyn laheyd guluuskeeda caanka ah in si aad ah loo aqoonsaday saacadaha saacadaha Gear. Halkii, Tizen wuxuu ahaan doonaa nidaamka hawlgalka oo leh nooc la habeeyey oo la hagaajiyay in lala shaqeeyo laba badhan oo muuqaal ah.
Qalabkaani wuxuu leeyahay magaca koodhka Saxaafadda iyo, sida laga soo xigtay isha, waxay ku imaan laheyd shaqada electrocardiogram si loola tartamo Apple Watch.
Dheeraad ah, Waxay lahaan doontaa 4GB oo kaydinta gudaha ah, Xusuusiyeyaasha Bixby, Wi-Fi, Bluetooth iyo NFC si ay u bixiso lacagaha mobilada. Arinta layaabka lihi, xantaas looma jeedinayo RAM ama GPS. Tanna sidan ayaan u nidhaahnaa maxaa yeelay mar kale tixraac ayaa loo sameeyay ugu yaraan qaybta labaad.
Ugu dambeyntiina, ma jiro wax fikrad ah oo ku saabsan goorta si rasmi ah loogu bandhigi doono Galaxy Sport. Mid ka mid ah itimaalnimada ayaa ah in la arko dhacdo dhacday Febraayo 20, mid kalena MWC19… ama haddii aan lagu arag munaasabad kale ka dib dhacdooyinkaas.